नेपालकै दर्दनाक इतिहास : जहाँ पलभरमै सयौ मारिए र जंगबहादुर उदाए
कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व कसरी घटेको थियो,त्यसपछि के भयो
Saturday, 10 Dec, 2016 2:16 PM
आजभन्दा १७० वर्षअगाडि नेपालको इतिहासमा एउटा हत्याकाण्ड भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमा कोतपर्वको नामले प्रसिद्ध छ । विसं १९०३ आश्विन ९ (सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४) को राति भएको उक्त घटनामा देशका मुख्तियारसहित धेरैजसो उच्च ओहदाका भारदारहरू मारिएका थिए भने सोही घटनाबाट नेपालको इतिहासमा जंगबहादुरको उदय भएको थियो ।
यद्यपी जंगबहादुर नायक कि खलनायक भन्ने विवाद कायम छ । सो भयंकर हत्याकाण्ड अचानक र आकस्मिक रूपमा केही घन्टाभित्रै भएको भएपनि नौ वर्षअगाडिदेखि नेपालमा व्याप्त अन्योल र अनिश्चिततालाई यसको पृष्ठभूमिका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।
विसं १८९४ मा राजा राजेन्द्रले भीमसेन थापालाई अपदस्थ गरेपछि नेपालमा अन्योलको वातावरण तयार भएको थियो । राजेन्द्र महत्वाकांक्षी त थिए तर उनको कमजोरी यो थियो कि उनले आफ्नी दुई रानीका क्रियाकलापलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकेका थिएनन् । उनका दुवै रानी त्यत्तिकै महत्वाकांक्षी थिए र दुवैले आ–आफ्नै स्वार्थ सिद्धिका लागि भारदारहरूका दुई प्रमुख समूहलाई आफूतर्फ मिलाएका थिए । जेठी रानी साम्राज्यलक्ष्मीले पाण्डेहरूको सहयोग प्राप्त गरेकी थिइन् भने कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीलाई थापाहरूको समर्थन थियो ।
भीमसेन थापाको पतनको लगत्तै साम्राज्यलक्ष्मीको दबाबमा रणजंग पाण्डे मुख्तियार त भए तर उनी कहिले गुरु रंगनाथ त कहिले चौतरिया पुष्कर शाहको नेतृत्वमा रही काम गर्न बाध्य हुनुपर्यो ।
केही वर्षपछि रणजंग शक्तिशाली मुख्तियार त बने तर उनको अंग्रेज सरकारप्रतिको नीतिले गर्दा राजेन्द्रले उनलाई पदबाट हटाए,तत्कालीन अंग्रेज सरकारकै दबाबमा । विसं १८९८ मा साम्राज्यलक्ष्मीको मृत्युपछि नेपालको राजनीतिमा कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीले हस्तक्षेप गर्न थालिन् । उनले भारतमा बस्दै आएका भीमसेन थापाका भतिजा माथवरसिं थापालाई नेपाल फिर्ता बोलाइन् र उनकै दबाबमा राजेन्द्रले माथवरलाई मुख्तियार बनाए । लक्ष्मीदेवीको स्वार्थ थियो युवराज सुरेन्द्र (साम्राज्यलक्ष्मीका छोरा) को अधिकार खोसी आफ्नै छोरा रणेन्द्रलाई राजा घोषित गर्नु । तर माथवर रानीको इच्छाअनुसार काम गर्न तयार भएनन्,किनकि त्यसबाट ठुलो विद्रोह हुने खतरा थियो ।
विकल्पको रूपमा माथवरले राजेन्द्रलाई गद्दी त्यागको सल्लाह दिए, किनकि सुरेन्द्रलाई विधिवत् रूपमा राजा घोषित गरेपछि लक्ष्मीदेवीले आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने हठ त्याग्नेछिन् भन्ने उनका बुझाई थियो । तर महत्वाकांक्षी राजेन्द्र राज्यत्याग गर्ने पक्षमा थिएनन् । यसप्रकार माथवरले राजा र रानी दुवैलाई चिढाउने काम गरे ।
परिणामस्वरुप राजा र रानी दुवै मिली माथवरको हत्या गर्न लगाए । जसमा प्रमुख भूमिका लक्ष्मीदेवीका प्रिय सहयोगी गगनसिंह र जंगबहादुरले खेलेका थिए । माथवरको अन्तपछि चार महिनासम्म देशको शासन व्यवस्था मुख्तियारबिना नै चल्न पुग्यो । लक्ष्मीदेवी गगनसिंहलाई मुख्तियार बनाउन चाहन्थिन् जबकि राजेन्द्र त्यसो गर्न तयार थिएनन् ।
अन्ततोगत्वा चौतरिया फत्यजंगलाई मुख्तियारको पद त दिइयो तर राज्यपरिषद् (मन्त्रिमण्डल सरह) जसमा गगनसिंह र जंगबहादुरलाई पनि समावेश गरियो । रानीको प्रिय पात्र भएको नाताले गगनसिंह निकै शक्तिशाली थिए र उनको अधीनमा सात पल्टन फौज थियो जबकि फत्यजंगको नियन्त्रण केबल तीन पल्टन फौज मात्रै थियो । गगनसिंहको उदय राजा, मुख्तियार, जंगबहादुर र अन्य भारदारका लागि एउटा चुनौती बन्दै गएको थियो । तर गगनसिंहको शासन धेरै समयसम्म चल्न सकेन । विसं १९०३ आश्विन वदी ९ को राति आफ्नै घरमा पूजा गरिरहेका बेला गगनसिहंको पनि हत्या भयो । गगनसिंहको हत्या कसले गर्यो भन्नेबारे अझै विवाद छ ।
तर गगनसिंहको उदय राजा, मुख्तियारलगायत कसैलाई मन परेको थिएन र उनको पतन लक्ष्मीदेवीबाहेक सबैले चाहेका थिए । आफ्नो प्रिय पात्रको हत्याबाट लक्ष्मीदेवीलाई ठूलो चोट पुग्यो र उनले हत्यारा पत्ता लगाउन सबै भारदारहरूलाई तुरुन्तै कोतमा हाजिर हुन आदेश जारी गरिन् ।
केही घन्टाभित्रै भारदारहरू कोतमा जम्मा भए । तर हत्यारा पत्ता लगाउनाको साटो भारदारहरूबीच आपसमा मारकाट सुरु भई जंगबहादुर र उनका सहयोगीहरूबाहेक अन्य सबैजसो भारदारहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए । कोतभित्र भएको हत्याकाण्ड भएकाले यसलाई कोतपर्व भनिएको हो ।
कोतपर्वको ६ महिनापछि विसं १९०३ चैतमा नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट थोरस्वेले घटनाको विस्तृत विवरण अंग्रेज सरकारलाई पाठए । जहाँ हत्याकाण्डको सम्पूर्ण दोष लक्ष्मीदेवीमाथि लगाइयो । गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने रानीको हठकै कारण उक्त हत्याकाण्ड भएको भन्ने रेजिडेन्टको दाबी थियो । सो पत्रमा कुनै निर्णय दिन नसक्ने भनी राजेन्द्रको पनि आलोचना गरिएको छ । किनकि कोतभित्र तनावको वातावरण पैदा भएकै अवस्थामा राजा कोतबाट बाहिर निस्किएका थिए । थोरस्वेको यो भनाइलाई सत्य मान्न सकिदैन त्यो पत्र जंगबहादुरले दिएको विवरणअनुसार तयार गरिएको थियो । घटनाको अर्को विवरण स्वयं लक्ष्मीदेवीले आफ्ना पति राजेन्द्रलाई लेखेको पत्रमा दिएकी छन् जसमा हत्याकाण्डको सम्पूर्ण दोष जंगबहादुर र उनका सहयोगी विजयराज पण्डितमाथि लगाइएको छ ।
कोतभित्र भएको हत्याकाण्डमा जंगबहादुर र उनका सहयोगीबाहेक अरू सबैजसो भारदारहरू मारिएका थिए । यसबाट जंगबहादुरले कोतभित्रको स्थिति आफ्नो अनुकूल बनाई हत्यकाण्ड गराएको तथ्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । कोतपर्वपछि जंगबहादुर मुख्तियार बने र उनलाई कम्यान्डर इन चिफको पदवी पनि दिइयो । तर उनले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन किनभने बस्नेतहरूको सहयोग लिई लक्ष्मीदेवी जंगबहादुरविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै थिइन् ।
खास कुरा के छ भने आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ महिलाको मृत्यु भएकाले बस्नेतहरू कोतमा सामेल भएका थिएनन् र उनीहरू बच्न सफल भएका थिए । आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको चाल पाई जंगबहादुरले बस्नेतहरूलाई युवराज सुरेन्द्रका शत्रु घोषित गरी राजेन्द्रकै आदेशअनुसार बस्नेत भारदारहरूको हत्या गराए जसलाई भण्डारखाल पर्व मनिन्छ ।
भण्डारखाल पर्व घटना कोतको हत्याकाण्डको ४५ दिनपछि भएको थियो र यस घटनापछि जंगबहादुरले लक्ष्मीदेवीलाई देश निकाला गरे । साथै जंगबहादुरले प्रधानमन्त्रीको पदवी पनि पाए । लक्ष्मीदेवीसँगै राजेन्द्र पनि बनारस गएपछि जंगबहादुर झन् शक्तिशाली भए र उनले अनुकूल स्थितिको सिर्जना गरी सुरेन्द्रलाई विधिवत् रूपमा नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरे ।
अर्कोतीर बनारसमा जंगबहादुरद्वारा निकालिएका वा भाग्न सफल भएका भारदारहरूले राजेन्द्रलाई नेपाल फर्की शासन पुनः कब्जा गर्न दबाब दिदै आएका थिए । त्यसमाथि आफू छँदाछँदै आफ्ना छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरेको खबरले राजा निकै क्रोधित पनि थिए । उनले एउटा सानो फौजको निर्माण गरेर केही भारदारहरूसहित नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरे । सेनाको फौजसहित राजेन्द्र नेपालतर्फ आएको थाहा पाउनेबित्तिकै जंगबहादुरले ठूलो फौज त्यसतर्फ पठाए । नेपालको सीमा नजिकै फौजबीच सामान्य भिडन्त भयो जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौं ल्याइए ।
उनलाई उकास्ने भारदारहरू त जंगबहादुरले ठूलो फौज पठाएको थाहा पाउनेबित्तिकै राजेन्द्रको साथ छाडी सीमापारि भागिसकेका थिए । विसं १९०४ यो घटनामा भदौ महिनामा घटेको थियो ।
कोत, भण्डारखाल र अलौ पर्वबाट जंगबहादुर शक्तिशाली शासक मात्रै भएनन्, उनले आफ्नो परिवारको सामाजिक स्तर पनि निकै माथि उठाए । राजा सुरेन्द्रको लालमोहरद्वारा उनी र उनको परिवारले ‘राणा’ को दर्जा पाए र त्यसको उपयोग गर्दै जंगबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि जोड्न पुगे ।
राजासरहको पदवी पाउने लालसाले जंगबहादुरलाई छोडेको थिएन । विसं. १९१३ मा प्रधानमन्त्री पद त्यागेको नाटक मञ्चन गरी उनी महाराज बने । तर अंग्रेज सरकारले उक्त पदलाई राजकीय मान्यता नदिएपछि जंगबहादुरले पुनः प्रधानमन्त्री हत्याए र महाराज प्रधानमन्त्री पदबाट विभूषित भए ।
कोतपर्वबाट सुरु भएको राणाहरूको जहानिया“ नेपालमा शासन १०४ वर्षसम्म कायम रह्यो र विसं. २००७ मा भएको १०४ दिनकै जनआन्दोलनले यसको अन्त गर्यो । त्यसपछि रणबहादुर शाहले आफ्नो जेठो छोराको अधिकार खोसी मन परेकी रानीको अठार महिने छोरालाई राजा बनाएपछि नेपालमा गृहयुद्ध भएको थियो । यस्तो इतिहासको पाठ बिर्सी लक्ष्मीदेवीले युवराज सुरेन्द्रको अधिकार खोसी आफ्नै छोरालाई राजा बनाउन खोज्दा कोतपर्व हुन पुगेको हो ।
शताब्दीको तानाशाही राणा शासन, जुन कोतपर्व पूर्वको नौ वर्षको राजनीतिक अस्थिरताभन्दा कयौ खतरनाक साबित भयो । जसका लागि नेपाली जनताले ठुलो त्याग र बिलदान गर्नुपर्यो । अहिले राजनीतिक स्थायित्वको नाममा एकतन्त्रीय व्यवस्था कहिल्यै स्वीकार्य हुन त सक्दैन तर हामीले विवेक नपुर्याउने हो भने राजनीतिक अस्थिरता÷अनिश्चितताले नेपाललाई जतापनि लैजान सक्छ । इतिहासको यो तितो सत्यबाट दलहरुले पाठ सिक्न जरुरी छ ।